Farmaajo waa halis ay qasab tahay in si deg deg ah looga bad-baadiyo Soomaaliya | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo waa halis ay qasab tahay in si deg deg ah looga...
Farmaajo waa halis ay qasab tahay in si deg deg ah looga bad-baadiyo Soomaaliya
Haddii aadan ahayn qof maskaxda xor ka ah, oo awooda inuu wax cabiro kadibna go’aan gaaro, ase aad tahay qof wixii loo sheega un iska aamino, fadlan qormadan hasii aqrin, waayo waxba kuu tari mayso, waxaan la hadlayaa dadka xoriyadda buuxda ka haysta maskaxda.
Imisa dhacdo oo kale ayaan u baahannahay si aan u baranno qofka rasmiga ah ee Farmaajo uu yahay? Farmaajo waxa uu na siiyey tusaale iyo fursad kasta oo aan ku ogaan karno wejigiisa dhabta ah iyo inuu waddankan halis ku yahay. Waxa uu sameeyey wax aan madaxweyne Soomaaliyeed weligiis ku fakarin, waxaase yaab leh in weli dadka qaar ay taageersan yihiin.
Bah-dilkii iyo dhacdadii foosha xumeyd ee uu shalay kula kacay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waxa ay ahayd gef weyn, oo ay tahay inuu xilka ku waayo. Wuxuu xoriyaddii socdaal ka qaaday madaxweyne Soomaaliyeed, oo dalkan usoo qabtay wax xitaa 10% ka mid ah uusan isaga u qaban.
Farmaajo kuma xadgudbin oo kaliya madaxweyne Soomaaliyeed oo ixtiraam iyo sharaf mudan, wuxuuse karaamada ka qaaday kuna abaal dhacay ninkii soo gacan qabtay, siyaasadda kusoo daray, isaga oo aan cidna aqoon Soomaaliya keenay ee xil u dhiibay. Ka sokow Allah, ninkii horseeday kursiga uu maanta ku fadhiyo.
Haddaan Farmaajo ugu qiil dayi lahayn in gefkii shalay uu ahaa “mid qura” ama wax uusan isaga wax ka ogeyn waxaa taas u diidaya xadgudubyadii hore ee tirada badnaa, oo ay ugu dambeysay xayiraaddii socdaal ee uu saaray shacabka Jubaland.
Farmaajo isaga oo doonaya inuu awood u sheegto Jubaland, si la mid ah HirShabelle iyo Galmudug ayuu xayiraad socdaal saaray Kismaayo. Ma rabo inaan difaaco Axmed Madoobe, balse yaa xayiraaddaas ay saaran tahay? Axmed Madoobe xilliga uu doonayo ayuu u duuli karaa Nairobi, balse dadka dhibban ee go’aanka Farmaajo uu ciqaabayo waa shacabka.
Taas kasii hor, Farmaajo waxaa ku maqan nolosha 17 qof oo shacab Soomaaliyeed ah oo amarkiisa loogu xasuuqay magaalada Baydhaba, iyo dhaawaca ku dhowaad 30 kale. Isaga oo awood sheeganaya, islamarkaana doonaya in qof isaga ka amar qaata madaxweyne looga dhigo Koonfur Galbeed ayaa si bareer ah amarkiisa loogu dilay shacabkii doonayey inay doortaan qofka ay rabaan.
Taas kasii hor, Farmaajo waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliya cadow arxan-darran, kadib markii uu Cabdikariim Muuse Qalbi-Dhagax u gacan geliyey Itoobiya, oo uu baxsad ka ahaa, waxa lagu haystayna ay ahayd kaliya u dirirka gobannimada gobollada Soomaali Galbeed ee Itoobiyaanka ay haystaan.
Taas kasii hor, Farmaajo waxa uu amray in la weeraro oo lasoo xiro siyaasi ka aragti duwan, kadib markii ciidankiisa ay gurigiisa ku beegsadeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur, halkaas oo ay dhowr wiil oo ilaaladiisa ka mid ahaa ku dileen, isagiina kasoo xireen. Waxa uu sidaas u sameeyey kaliya in Cabdiraxmaan Cabdishakuur muujiyey aragti uusan Farmaajo jecleysan.
Dhacdooyinka aan soo xusay waa qaar ka mid ah kaliya tobanaan xadgudub oo Farmaajo uu sameeyey, waase ka badan yihiin intaas.
Laba sano iyo bar oo uu xukunka hayo Farmaajo, waxaa sii ballaaranaya awooddii Al-Shabaab, oo gaartay heer ay Muqdisho sida dowlad oo kale canshuurta uga qaadaan. Waxaa batay qaraxyadii iyo dilalkii ay fulin jireen. Shacabkii Xamar waxaa laga xiray waddo kasta oo nolosha ayaa lagu ciqaabay. Ciidamadii dowladda ayaa Shabeellooyinka wxaaa ku ugaarsanaya Al-Shabaab. Jidkii Muqdisho iyo Jowhar ee markiii uu xilka qabtay baabuur lagu safri jiray, waxaa hadda xirtay Al-Shabaab oo maalin kasta ku laaya mas’uuliyiinta iyo shacabka.
Maalinkii Farmaajo la doortay waxaa kursiga ku wareejiyey laba madaxweyne oo kasoo jeeda Muqdisho, oo lahaa awood ciidan, mid shacab, iyo mid dhaqaale oo ay xukunka xoog ugu haysan kareen, waxayse kurisga uga kaceen in ilaaliyo sharciga iyo dastuurka dalka, si ay dhabbe cusub oo dimoqraadi ah ay ugu jeexaan dalka.
Farmaajo kursi uu wareejiyo iska daa’e, xitaa wuxuu uu xamili la’yahay aragti isaga kasoo horjeeda, mana muuqato inuu kursigan si sharci ah uga kici doono haddii laga adkaado, inta ka horreysanay inuu Soomaaliya dib u celiyo mooyee lagama sugayo inuu hore u dhaqaajiyo. Farmaajo waa halis u baahan in si deg deg ah looga bad-baadiyo Soomaaliya.
Previous articleDR. ABDIQASSIM SALAAD HASSAN MUXUU UGA DUWAN YAHAY HASSAN SHEEKH IYOI SHEEKKH SHARIF?